အေးဗျာ စာမတတ်တဲ့ ကောင်တွေတက် အုပ်ချုပ်တော့ ပညာရှင်တွေ ဆုံးရှုံးရတယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ DSTA ကပါ/ချုပ်က
YIT မှာ Civil Roll-1 နဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့တာဗျ။
အင်ဂျင်နီယာလဲဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးသိတယ်။ ဆရာတွေလား။
DSTA ကဆရာတွေလည်းတော်တာပဲဗျ။ extension
တွေဖြစ်ခဲ့လည်း မေးကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဗျ။ ကျောင်းသားတွေလား။ ကျောင်းသားကအများကြီးဗျ။
သတင်းမှားပဲဖြစ်လိမ့်မပေါ့။ နေပါဦးဗျာ။ စကားမစပ်
ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတုန်း။ အင်ဂျင်နီယာလား။ ဆရာဝန်လား။ မြန်မာပြည်မှာ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်
ပြီးဘယ်အဆင့်ရောက်ခဲ့ပြီလဲ။ ဘာလဲ။ ညာလဲ။ မသိလို့မေးတာနော်။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ ကျွန်တော်
လည်း ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်အောင် comment ၀င်ရေးတာပါ။ ကိုယ့်ဆိုက်မှာတော့
media သမားအစစ်။ ကြားဖူးနားဝတို့၊ ဟိုကဒီက
တို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေချင်တာ ကျွန်တော့်
ဒီသတင်းကတော့ အမှန်တ၀က် အမှားတစ်ဝက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျို့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ပြတဲ့အတွက် ဗဟုသုတ ရတာပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်ကတစ်ခုလောက်မေးမယ်နော်အခု ဘလော.ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလဲ..ဘယ်နှခုနှစ်က ၁၀တန်းအောင်တာလဲ..
ရေးထားတဲ DSTA အပတ်စဉ်ကရော ဘယ်အပတ်စဉ်ကလဲ (စာမေးပွဲ အားလုံးကျတယ်ဆိုတော.)
ကျွန်တော် ၁၉၉၈က ၁၀ တန်းအောင်တယ်
ကျွန်တော်တက်ခဲ.တဲ. အပတ်စဉ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင်.၁၀ တောင်ပါပါတယ်
ကျွန်တော်တို.က တစ်နိုင်ငံလုံးကို မေးခွန်းတစ်စုံထဲဖြေတဲ.နှစ်က အောင်တာပါ
၀ိုင်အိုင်တီ မဖွင်. ကျောင်းတွေပိတ်ထားလို.သာ စစ်တပ်ထဲရောက်လာတာပါ...
ခင်ဗျားပြောတဲ. နှစ်က ဘယ်နှစ်ကလဲ အဲတာလေးတစ်ချက်လောက်ဖြေပေးပါခင်ဗျာ..
နေရာတိုင်းမှာ တော်တာ၊ ညံ့တာကတော့ ရှိပါတယ် ။
အဲဒီဖြစ်နေတဲ့ သူ မရှိဘူးလို့ မပြောပါဘူး။အားလုံးကို ခြုံပြောတာ မလုပ်သင့် ဘူး။လူဆိုတာ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာက ကိုယ့် အဆင့် အတန်း ကိုပြနေတာဘဲ။စာရေးဆရာ ခင်ဗျား ဒီလောက်ဆို ဘာလုပ်သင့် နားလည်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ခင်ဗျားဟာ ပညာတတ် တစ်ယောက်ဆိုရင်ပေါ့ ..........................
စာရေးသူခင်ဗျာ DSTA မှာစာမေးပွဲမကျဘူးလို့ မပြောလိုပါဘူး ကျတဲ့သူတွေ ကျတယ် အပတ်စဉ်တိုင်းမှာ ကျကျန်ရစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ ၁၀တန်း မတက်ခဲ့ဘူးလား ဒါမှမဟုတ်စာရေးသူ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုကျောင်းသားအများစုတွေ DSTA ရောက်ကြ ပါသလဲ..၁၀ တန်းတက်ခဲ့ဖူးရင်လည်း ဘယ်လိုသူငယ်ချင်းတွေရောက်ကုန်လဲ ..ဒါကအခြေခံလေးစဉ်းစားတတ်ဖို့ပါ အရင် YIT ရှိတုန်းကလည်း အဲဒီကျောင်းသားတွေအောက်အမှတ်နဲ့ ခေါ်ခဲတဲ့ အပတ်စဉ်မရှိဘူးဗျ DSTA ၀င်ခွင့်အမှတ်က YIT တက်ခွင့်အမှတ်နဲ့ တူတူပဲဗျ ပြီးတော့ အပြင် Enginner တွေမေးကြည့်ပါဦး... DSTA ကဆင်းတဲ့သူတွေ ညံ့လားလို့ ခင်ဗျားရေးတဲ့ စာက ခင်ဗျားအဆင့်အတန်းကိုပြနေတာပဲ
selection ကိုတောင်ခင်ဗျားကမှန်အောင်မပေါင်း တတ်ဘဲနဲ့ slection ဆိုပြီးရေးထားသေးတာပဲ။ သူများတွေကို ပြောနေရအောင် ခင်ဗျားကရော ပညာရေးမှာ ဘယ်အဆင့်အတန်းရောက်နေလို့လဲ။ တပ်မတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါရင်ပြီးရောဆိုပြီး မကောင်းရေးရရင်ကျေနပ်နေတာလား.....ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ပါအုံးဗျာ ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီးလေဖမ်းဒန်းစီးလျှောက်ရေးနေမဲ့အစား ဆရာကြီးရဲ့ နာမည်နဲ့ စာမေးပွဲကျတယ်ဆိုတဲ့ အပါတ်စဉ်ရဲ့နာမည်ကို ခင်ဗျားသေချာအောင် ပြန်စုံစမ်းအုံးပေါ့ဗျာ...နောက်ပြီး ခင်ဗျားပြောတဲ့ DSTAကပါမောက္ခချုပ်လုပ်တဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံး
နောက်ပြီးခင်ဗျားကိုတစ်ခုပြောရအုံးမယ် အပြင်မှာ ဘာမှလုပ်မရတဲ့အမှတ်ကြောင့်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားသေချာသိစေချင်ပါတယ်
ဒါနဲ့ခင်ဗျားရောဆယ်တန်းကိုဘယ်အဆင့်နဲ့အောင်တာလဲ THE WHOLE BURMA 10 ထဲမှာပါတယ်ထင်တယ်....ဒါပေမယ့်ဗျာ selection ကိုတော့မှန်အောင်ပေါင်းသင့်ပါတယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်
နောက်ပြီးခင်ဗျားကအခု အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှုာလို့ထင်ပါတယ်
နွေဆူးလင်္ကာခင်ဗျာ အခုအသက် ၃၄ လောက်ကနေ ၂၄ လောက်အထိ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူရှိမယ် အစိုးရကိုမကြိုက်တဲ့သူ စစ်တပ်ကိုမကြိုက်တဲ့သူရှိမယ် ဒါပေမယ့် ပညာသင်ကြားခဲ့မယ် ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပိုစ်မျိုးမရေးပါဘူးခင်ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတောက သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ အသိတွေ အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာ ရှိနေကြလို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိလားမရှိလား သူတို့သိတယ် ခင်ဗျားပို့စ်ကို ထောက်ခံတဲ့သူကတော့ စာမတတ်ခဲ့ဘူးဗျ ဘာအသိမှမရှိတဲ့ကောင် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဆိုရင်တော့ ပညာတတ်စရာမလိုပဲ လက်လုပ်လက်စားနဲ့ ရောက်လာတဲ့သူဖြစ်မယ် ခင်ဗျား အခုလိုရေးလိုက်ရုံနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဖြစ်ရော့လား ရီစရာကြီးဗျာ တကယ့် အတိုက်အခံ blogger တွေတောင် သူတို့မရေးဘူးခင်ဗျားလို နိုင်ငံရေးမှာလည်း ခင်ဗျားလို ကောင်တွေရှိနေလို့ တကယ်လူတွေနာမည်ပျက်နေတာ ဘာလုပ်လုပ် ခေါင်းလေးသုံးဗျ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့လူတွေ ခင်ဗျားပြောသလိုဖြစ်နိုင်ပါ့မလား
အဟုတ်ပါလားလို့ ထင်ထားသမျှတွေဟာ လွဲနေတတ်သလို မဟုတ်ဘူးလို့ မြင်နေသမျှတွေလည်း မှန်နေတတ်ပြန်တယ်။
( ခင်ဗျားရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို ၀င်စရာအပေါက်တွေ အများကြီးပဲဗျ သတိထားပေါ့ဗျာ )
ခင်ဗျားက တော်တယ်တက်တယ်ကို ဘယ်ပေတံ ဘယ်စံ
နဲ့ တိုင်းတာ သတ်မှတ်လဲ ကျွန်တော် မသိဘူးဗျ။
အခု ခင်ဗျားရေးထားတာကတော့ခင်ဗျားမှာ
အကြောင်းအကျိုး အမှားအမှန်တောင် ဝေဖန်ပိုင်းခြား
နိုင်တဲ့ အသိပညာ မရှိတာ သေချာတယ်။လောကမှာ
ကိုယ်ပြောတာ ကိုယ်တန်ဖိုးထား တာဝန်ယူနိူင်မှ
ခင်ဗျားပြောတဲ့ လူတော်ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ်ဗျ။ စဉ်းစာပါ ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ ပြီးမှ
အမှန်တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောပါ အောင်မြင်ပါစေ။
လူဆိုတာကတော့ တော်တဲ့သူလဲ ရှိသလို ညံ့တဲ့သူလဲ ရှိမှာပဲ
ကိုနွေဆူး တစ်ခုခုရေးတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆို ရင်ခေါင်းလေးတော့နည်းနည်းလေး သုံးပါဗျာသူတစ်ဘက်သားကိုသိက္ခာ
လူကြီးတွေကတော့ပြောကြတယ် ဗျ ..ခွေးဟောင်တိုင်းထမကြည့်နဲ့တဲ့
အစကတော့ထမကြည့်ပါဘူး ။။ ဒါပေမယ့်ခွေးကအမဖြစ်နေပြီးမိန်းမလိုမိန်းမရ
အခြေအမြစ်မရှိ ... သက်သေမရှိ .. ထမိန်ကြားကလက်သီးပုန်းပြနေသလိုဖြစ်လို့
အတွေးအခေါ်က ကလေးသာသာ နဲ့ လျှောက်မလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့ ဗျာ
လျှောက်ပြီးပုတ်ခတ်နေတော့ ခင်ဗျားပါးစပ်က အိမ်သာစော်နံလာလိမ့်မယ် ..
ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုယ်လုပ် .... ပါ ဗျာ ..
ထမကြည့်တော့ဘူး ..အိပ်ရေးပျက်အောင် မဟောင်နဲ့ ဗျာ
အေးဗျာ...ခပ်ရိုင်းရိုင်းနှိုင်းရရင် ကြောက်တတ်တဲ့ခွေးတောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ရင် ပြန်ကိုက်တတ်သေးတာပဲလေ။ လူတွေဆိုတာကတော့ ပြောမနေနဲ့လေ။ မြန်မာတွေဆို ပိုတောင်ဆိုးသေး။ ဟဲဟဲ။ ခင်ဗျားက လူတွေရဲ့ အတ္တနဲ့ မာနကို သွားထိခိုက်တာကိုးဗျ။ သတိထားပေါ့ဗျာ နော။ နောင်ဆိုရင် သင်ခန်းစာရတာပေါ့။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာ။ ကျုပ်တို့တွေဟာ အပြန်အလှန်ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတာနဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်ခဲ့ပေါင်း များခဲ့ပြီနော်။
online ပေါ်မှာ ပညာရှိ blogger တွေဟာ သူတို့ သိထားတဲ့knowledge တွေကို share လုပ်ပြီး ပညာသင်နေကြတာပါ..။တချို့ ကလည်း သူတို့ ရဲ့ ခံစားချက်ကို ရသတခုအနေနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ ဘာမှ မတတ်ရင်တောင် သူများတွေကို မထိခိုင်အောင်ရေးတတ်ပါတယ်။
သူတို့ ရေးတဲ့ စကားလုံးတိုင်းကိုလည်း တာဝန်ယူရဲသူတွေပါ..။ ခင်ဗျားရော ခင်ဗျားရေးထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူရဲလား..။ကိုယ့် post ကို ကိုယ်တာဝန်ယူရဲ မှ ယောက်ျားနော်....။
online ပေါ်မှာ ပညာရှိ blogger တွေဟာ သူတို့သိထားတဲ့knowledge တွေကို share လုပ်ပြီး ပညာသင်နေကြတာပါ..။တချို့ ကလည်း သူတို့ ရဲ့ခံစားချက်ကို ရသ တခုအနေနဲ့ဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ ဘာမှ မတတ်ရင်တောင် သူများတွေကို မထိခိုက်အောင်ရေးတတ်ပါတယ်။
လူတွေကကို့ ထက်သာရင် မနာလိုဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ခင်ဗျားလဲအဲဒီလိုများဖြစ်နေ
လို့ လား ?ခင်ဗျားသာ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင် မနာလိုစိတ်ထားမျိုး မထားပဲ ဒီလို post မျိုး မရေးပဲ
ပေါ့ဗျာ ကောင်းရာကောင်းကြောင်း ပညာရနိုင်မဲ့ post
မျိုးရေး ဖို့ ပဲ အကြံပေးချင်တယ်ဗျာ ။ခင်ဗျားသာ ပညာရှင်
ရာသီဥတုငြိမ်မှတိုးတိုးလေးပြောသွားတယ်ဗျာလူတိုင်းဟာ အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေကြတယ်။ ကြိုးစားတဲ့လူတွေဟာထိုက်တန်မှုတွေရနေကြပါပြီ တချို့ D S T Aဆင်းတွေမှာ
ကိုယ်တို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးကွာ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ၁၀တန်းကို အမှတ်ဘယ်လောက်နဲ့အောင်အောင် DSTA လျောက်လို့ရတာတော့ သိတယ်။ အရင်ကတော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ အခုတော့ မရတော့ဘူး လူတော်လူကောင်း တွေမရှိတော့ဘူး။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာကျဦးမယ်။ မှတ်မိ မှာပါ တချိန်က တပ်မတော်နည်းပညာကောလိပ်ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းလေးကိုပေါ့။